Xukuno lagu riday wiilashii kufsiga ka gaystay Magaalada Galdogob (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xukuno lagu riday wiilashii kufsiga ka gaystay Magaalada Galdogob (Daawo Sawirada)
Waxaa maanta Magaalada Galdogob lagu soo gaba gabeeyay dacwad ciqaabeedkii loo haystay shan ka mid ah lix wiil, oo bishii hore ee December laba hablood ku kufsaday duleedka Galdogob.
Culima’udiinka deegaanka oo iyagu lahaa go’aan ka gaarista xukunkan, ayaa waxaa la sheegay in ay ku saleeyeen Shareecada Islaamka.
Culimada, ayaa wiilasha ku xukumay xarig u dhaxeeya shan illaa toban sano, ganaax lacageed iyo jeedal/karbaash u dhaxeeya boqol illaa laba boqol.
Qoysaska wiilasha la xukumay, ayaa waxaa ay aqbaleen in ay ku kalsoon yihiin Shareecada Islaamka, iyadoo ujeedaduna uu ahaa in cadaalad ay hellaan hablihii la kufsaday.
Eedeysane-yaasha oo lix gaaraayay, ayaa waxaa goobta xukunka lagu soo bandhigay shan oo keliya, iyadoo midka kalana la sheegay in weli baxsad uu ku maqan yahay. Eedeysane-yaasha ayaa madasha maxkamadaynta ka soo muuqday, iyagoo min lug iyo gacan ka katiinadeysan.
Goobta uu xukunku ka dhacay, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Cadaaladda & Arrimaha Diinta Puntland, Saalax Xabiib Jaamac, Wasiirka Haweenka & Arrimaha Qoyska Puntland, Anisa C/qaadir Xaaji Muumin iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland, General C/qaadir Shire Faarax (Ereg).
Puntland, ayaa ciidan badan gaysay goobtii uu xukunka ka dhacay, oo ammaankeeda si wayn loo adkeeyay. Xukunkan waxaa uu ahaa mid Soomaali oo dhami ay isha ku haysay.
Diiwaangelinta Musharaxiinta Madaxweynaha oo la soo gaba gabeeyay
Sheekh Shariif oo xalay gaaray Imaaraadka Carabta iyo Qorshaha Imaaraadka…